China Wreath vagadziri uye vanotengesa | Mia Kugadzira
Key Magadzirirwo: ruva chiuno, chinongedzo cheHalloween
Item nhamba: I09841714
Ruvara: tsvuku, nhema
Saizi: D: 19cmm
MOQ: 300pcs / ruvara
Asia 、 Australasia 、 Eastern Europe 、 Mid East 、 Africa 、 North America 、 Western Europe 、 Central 、 South America
Kavha Saizi: 30 * 30 * 30
Kavha huwandu: 300
Kurema kweNet: 4 kg
Huremu hwese: 5 kg
20GP mudziyo huwandu: 300000 pcs
Midziyo yakawanda: 622222 bv
40HP mudziyo huwandu: 733333 zvidimbu
Mutengo 、 Sevhisi 、 Chigadzirwa Chigadzirwa 、 Kukurumidza Kuunzwa 、 Zvinotapira 、 Kunzwa Kwakanaka 、 Musono Musanganiswa 、 Kudzivirira
Makore gumi nematatu zvakajairika zvekutengesa ruzivo nechitoro, cheni-chitoro, wholesales uye vatengesi.
ANOGONESESA FLORAL WREATH HEADBANDS: Nongedza bvudzi rako rekushandisa mutambo neaya maruva emusoro. Inouya muRutsvuku nechitema. Kugadzirisa aya mabhande epamusoro, ingo sunungura coil yakasungirirwa yewaya uye woigadzirisa kune saizi yakanaka, wozoidzosera pamwe chete.
MATERIALS: Iri bhandi remusoro rakagadzirwa newaya yakavharwa nebepa girini uye yakashongedzwa neyakajeka uye ine mavara enhema maruva peturu pamwe neiyo chaiyo jira jira.
Neiyi Ruva Musoro bhanhire, iva nekunakidzwa kukuru kwemapati, michato, kuchata, varoora, mhemberero, mhemberero, kufamba, uye zvimwe zviitiko zvakakosha. Maruva korona bvudzi bhendi rinotaridzika chaizvo uye rakasununguka kupfeka. Yakakwana kune avo vanokanganisa maruva uye vanotambura nemusoro nekuda kwemaruva anonhuwirira zvakanyanya.
Korona yemaruva yakakodzera kune vacheche, vasikana, vakadzi uye vakadzi chero nguva. Floral Crown ine zvakapusa, inotapira, ine rudo, yakashongedzwa dhizaini, inoita kuti vasikana vako vataridze kunakidza uye kubata maziso, Kunyangwe muHalloween.
Pashure: Halloween Screw Mhete
Zvadaro: DIY-vana vakapfeka zvishongedzo
dandemutande dandemutande mhete yeHalloween
Bvudzi reHalloween chiuno mudandemutande
Halloween dehenya rebvudzi rakasununguka